कर्णालीलाई आयुर्वेदमा अब्बल बनाउने अवसर छ – Yug Aahwan Daily
कर्णालीलाई आयुर्वेदमा अब्बल बनाउने अवसर छ
युग संवाददाता । २६ मंसिर २०७८, आईतवार १२:४७ मा प्रकाशित
बरिष्ठ वैद्य, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, कालीकोट
कर्णाली जडिबुटीमा धनी छ । उच्च तथा हिमाली क्षेत्रमा त औषधिजन्य जडिबुटीको भण्डार छ । जसबाट अमूल्य औषधि बनाउन सकिन्छ । तर दुर्भाग्य, कर्णाली सधै सिटामोलको अभावमा छटपटाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर पनि बरिष्ठ आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी लक्ष्मीप्रसाद पाण्डे भने जडिबुटीको सदुपयोग गर्दै कर्णालीलाई आयुर्वेद औषधिको क्षेत्रमा अब्बल बन्ने अवसर देख्छन् । जसका लागि आयुर्वेद औषधिको प्रयोग र जडिबुटीको प्रशोधन गर्नुपर्ने पर्दछ । एक दशकदेखि आयुर्वेदको क्षेत्रमा सक्रिय उनी जडिबुटीको सदुपयोग गर्नसके लाखौंपर्ने औषधिलाई विकल्प बन्ने सम्भावना देख्छन् । प्रस्तुत छ, हाल आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र कालीकोटका कार्यरत उनै पाण्डेको जीवन भोगाइ र निजामति क्षेत्रको अनुभवमा केन्द्रीत रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तिलागुफा नगरपालिका वडा नं. १ नाग्ममा २०४३ साल असोज ६ गते लक्ष्मीप्रसादको जन्म भएको हो । उनी बुवा स्व. भिमप्रसाद र आमा गंगादेविका कान्छा छोरा हुन् । दुर्गम कालिकोट जिल्लाको फोइ महादेव गा . बि .स , वडा न २ नाग्ममा जन्मिएका लक्ष्मीको बाल्यकाल भने सुखद रह्यो । उ बेला गाउँमा गाडी पुगेको थिएन । विद्युत, खानेपानी जस्ता भौतिक पूर्वाधारको अभाव थियो । तर पनि उनको बाल्यकाल सुखद् रह्यो । कान्छो छोरा भएका कारण मेलापात गर्ने पर्थेन् । कहिलेकाँही गाइगोठाला जान्थे तर बाध्यकारी थिएन । स्याउ बगैचामा हाँस्दै खेल्दै बालापन विताए । मेलापात गर्नुपर्ने समयमा गाउँमा बसेनन् । पढ्नका लागि बर्दिया पुगे । उत्तै हुर्किए । अनि जीवनको जग बसालेर मात्रै घर फर्किए । मध्यमपरिवारमा हुर्किएका उनले घरको जिम्मेवारी र आर्थिक अभावहरु भोग्नु परेन् ।
घरमै सिके कखरा
लक्ष्मीले अनौपचारिक पढाईको सुरुवात घरबाटै गरे । दाई र बुवाले कखरा सिकाए । गाउँकै मालिका प्राथमिक विद्यालय नाग्माबाट औपचारिक शिक्षा सुरु गरे । त्यहाँ कक्षा १ मात्र पढे । त्यसपछि बर्दिया पुगे । गेरुवा गाउँपालिका वडा नं. ४ तिनघरुवाको बालप्रिय प्रथामिक विद्यालयबाट कक्षा २ र ३ को पढाई पुरा गरे । त्यसपछि फेरी गाउँ फर्किए । कालीकोटको महादेव माध्यमिक विद्यालय फोइबाट कक्षा ४ उत्तिर्ण गरे । पुनः उनी बर्दिया पुगे । कक्षा ५ देखि १० सम्मको पढाई जनता माध्यमिक विद्यालय गोलाबाट पुरा गरे । २०५९ सालमा एस.एल.सी उतिर्ण गरे । बबई बहुमुखी क्याम्पस बर्दीयाबाट प्लसटु र सोही समयमा बर्दिया टेक्निकल इन्ष्टिच्यूटबाट आयुर्वेद शिक्षा लिए । सुर्खेत क्याम्पस शिक्षाबाट स्नातक तह र जुम्ला बहुमुखी क्याम्पस जुम्लाबाट स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गरेका छन् । पढाईमा उनी मध्यमस्तरमा विद्यार्थी मानिन्थे । पढाईमा कहिले दोस्रो र तेस्रो हुन्थे । पढाइसँगसँगै हाँजिरी जवाफ र वक्तिवकला प्रतियोगितामा विशेष रुचि राख्थे ।
पहिलो प्रयासमै सफलता
लक्ष्मीलाई सरकारी जागिर नै खानुपर्ने बाध्यता थिएन । पढ्नका लागि परिवारको राम्रो साथ र सहयोग थियो । तर उनीमा सानैदेखि प्रतिस्पर्धाको भावना थियो । अरुभन्दा म पनि के कम भन्ने सोच्थे । अन्तः यही प्रतिस्पर्धाको भावनाले उनले निजामति क्षेत्रमा सफलता पाए । एक जना साथी सरकारी जागिरमा जोडि सकेका थिए । लोकसेवा आयोगले जनशक्ति माग गरेपछि उनले आवेदन दिए । तर आवोदन दिन जाँदा आफूभन्दा कमजोर साथीहरु भेटाए । त्यसपछि झनै प्रतिस्पर्धाको भावना बृद्धि भयो । अरुभन्दा राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने सोचे । सोही अनुसार तयारी गरे । अन्ततः यही प्रतिस्पर्धाको भावनाले उनी सफल भए । २०६६ बैशाख २५ गतेदेखि निजामति क्षेत्रमा प्रवेश पाए । सिजा आयुर्वेद औषधालयमा उनको पहिलो कर्मथलो बन्यो । करिव सात बर्ष जुम्लामा सेवा गरेका उनले त्यहाँ नमिठा क्षणहरु गुजारे ।
न दुःखमा साथ दिने साथीहरु भेटिए नत भने जस्तो कार्यालय । पानी र हिउँ पर्दा चुहिने कार्यालयबाट सेवा गरे । भाडाको घरबाट औषधालय थियो । न सेवा दिन सहिज थियो न त आनन्दले बस्न मिल्थ्यो । तर उनीले धेरै सयम बेहाललाई सहन सकेनन् । औषधालयको लागि तत्कालीन विराट गा.वि.स सँग कार्यालयको लागि जग्गा माग गरे । स्थानीयले ६ सय बर्ग मिटर जग्गा निशुल्क दान दिए । कानूनी प्रक्रियामा जग्गा आयुर्वेदको नाममा ल्याउन आफै खटिए । तत्कालीन अञ्चल आयुर्वेद औषधालयका प्रमुख डाक्टर योगेश बैद्य र उनले विभागसँग भवन निर्माणको लागि रकम माग गरे । अन्नतः करिव तीन बर्षको अवधिमा भवन बनाउन सफल भए । २०७३ सालमा उनको सरुवा बाकेमा भैसकेको थियो तर आफ्नो गृह जिल्लामा सेवा गर्ने तिब्र ईच्छा शक्तिका कारण बिभागमा सरुवा संसोधनका लागि निवेदन पेस गरे । सो अबधि सम्म कार्यालयको आफ्नै भवन बनिसकेको थियो । उनले नयाँ भवन बाट थप नयाँ सेवा प्रदान गर्ने सोच बनाए र छिमेकी गाउँविकास समितिहरु सग समन्वय गर्दै प्राप्त गरेको आर्थिक सहयोगबाट कार्यालयमा पहिलो पटक सुरु गरेको स्नेहन / स्वेदन कार्यक्रम संचालन गर्न प्रयास गरे तर उनको स्थानमा सरुवा भएर आउने कर्मचारी साथिले कार्यालयबाट सो सेवा नियमित भए आफुलाई दु:ख हुने भन्दै सेवा उद्घाटन नगर्न भने । आफ्नो पेसा पर्तिको जिम्मेवारी र सेवा भावलाई पुष्ठि गर्दै नयाँ कार्यालयबाट नयाँ सेवा प्रारम्भ गरेर २०७३ फागुन १० गतेदेखि जुम्ला छोडे । आफ्नै जन्मभूमिको सेवा गर्ने उद्देश्यका साथ कालीकोट फर्किए । हालः उनी आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र कालीकोटका बरिष्ठ बैद्यको रुपमा कार्यरत छन् ।
आयुर्वेदको सेवा विस्तार गराैं
आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी लक्ष्मीले कर्णालीको जडिबुटीमा प्रशस्त सम्भावनाहरु देख्छन् । करोडौं मूल्य पर्ने जडिबुटीको भण्डार हुँदा पनि प्रदेशमा सिटामोलको अभाव भोग्नु परेको देख्छन् । जहाँतही सिटामोललाई प्रतिस्थापन गर्न अर्थात सिटामोलको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने विभिन्न जडिबुटीहरु छन् । यसको सही प्रयोग र प्रशोधन गर्नसके कर्णाली आयुर्वेद स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सकिने उनको बुझाईछ । उनी जडिबुटीबाट कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रशस्त अवसरहरु देख्छन् । देश संघिय संरचना गैसके पछि कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा कर्णालिमा गरेको स्वास्थ्य सस्था मर्जले नेपालको मौलिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदको अस्तित्व मेटाउन खोजेको बताउनु हुन्छ । कर्णालीको भुगोल सुहाउदो यो आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वतन्त्र कार्यालयको रुपमा स्थापना गर्दै यश क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान र बिकासमा प्रयाप्त लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । आयुर्वेद औषधिको प्रयोगलाई बढाउन र सेवा विस्तार उनी आफै सक्रिए छन् । कालीकोट फर्किएपछि आफ्नै नेतृत्वमा खाँडाचक्र नगरपालिका र समन्वयमा पचाल झरना गाउँपालिका र पलाँता गाउँपालिकामा आयुर्वेद सेवा विस्तार गरेका छन् । स्थानीय तहसम्म सेवा विस्तार भएको दिन धेरै खुशी मिलेको उनको भनाई छ ।
राष्ट्रको सेवा गर्न निजामति उपयुक्त क्षेत्र
जसले कलिलै उमेरमा बाल्यकालको सपना पुरा गर
प्रदेश सरकारको काममा सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन
१९ बर्षको उमेरमै सरकारी सेवामा प्रवेश